ငရုတ်ချဉ် ၊ ကြက်သွန်ချဉ် ၊ ငရုတ် ကြက်သွန်ချဉ် လုပ်နည်းစုံ -
Category : COOKING, LIFE STYLE
ငရုတ်ချဉ် ၊ ကြက်သွန်ချဉ် ၊ ငရုတ် ကြက်သွန်ချဉ် ကျမအိမ်မှာ အဆင်သင့် အမြဲလုပ်ထားတတ်တဲ့ အိမ်လုပ်ချဉ် လေးတွေကို စားချင်တဲ့ သူများအတွက် တင်ပေးလိုက် တယ်နော် ။
……… ပါဝင် ပစ္စည်းများ …….
၁ ။ ကြက်သွန်ဖြူ ဥတစ်လုံး ( အခွံနွှာထားပါ ) ……. ၂ ။ ငရုတ်တောင့် ရှည် ( ခပ်ထူထူ လှီးထားပါ )…….. ၃ ။ ရှာလကာရည်……၄ ။ ငံပြာရည်………. ၅ ။ ဟင်းခပ်မှုန့် ( မထည့်လဲရ )
ပထမဆုံး ရှာလကာရည်, ငံပြာရည်, ဟင်းခပ်မှုန့် တို့ကို ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးထဲ ထည့်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် အရသာ အချို, အငံစပ်ပါ ။ ဟင်းခပ်မှုန့် ကတော့ မိမိအကြိုက် အနည်း အများ ထည့်ပါ ။
မကြိုက်ရင် မထည့်လဲ ရပါတယ် ။ အချဉ်ဓါတ် ထိန်းဖို့ ကျမကတော့ ထည့်ပါတယ် ။ ပီးတော့မှ ငရုတ်, ကြက်သွန် ထည့်ထားတဲ့ ပုလင်းထဲ ကန်တော့လေးနဲ့ လောင်းထည့်လိုက် ရုံပါပဲ ။
၎င်းနောက် ဖန်ပုလင်းကို လေလုံအောင် ပိတ်ထားပါ ။ ၃ ရက်ဆို စ စားလို့ရပါပြီ ။ ချဉ်ချဉ်လေး စားချင် ရင်တော့ တစ်ပတ်ထိ ထားပါ ။ မိမိစိတ်ကြိုက် အချဉ်အရသာ ရပြီဆိုရင်တော့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းထားပါ ။
ကြာလေ အချဉ်စူးလေ ဖြစ်ပြီး လုပ်ရတာလဲ လွယ်ကူတာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် တော့ တစ်ခါလုပ်, တစ်ခါစားပဲ ကောင်းပါတယ် ။ ထမင်းပေါင်း,ထမင်းကြော်,ကြာဇံကြော်,ကြက်ကင် ဘာပဲ လုပ်စားစား အိမ်လုပ်ချဉ် ရှိတော့ အဆင်သင့် စားရုံပါပဲ ။
Hot Pot နဲ့ စားရင်တော့ ခုစိမ်ထားတဲ့ အိမ်လုပ်ချဉ် ထဲကို သကြား ထပ်ထည့်ပီး စားပါတယ် ။ အရောင်ပါတဲ့ အချဉ်တွေထက် အိမ်လုပ်ချဉ် ကို ပိုကြိုက်ပါတယ် ။ ကော်ဗူးက ကြာရင် ကော်နံ့ ထွက်တတ်တာမို့ ပုလင်းနဲ့ စိမ်တာက ပိုကောင်း ပါတယ် ။ ခုလို စိမ်ထားတော့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းထဲကို အရသာ စိမ့်ဝင်နေပီး ပိုစားကောင်းပါတယ် ။
ကင်းမွန် ငံပြာရည် ထည့်ထည့်, ဗမာငံပြာရည် ထည့်ထည့် ရပါတယ် ။ ရေမရောရပါဘူး ။ သက်သက်လွတ် သမားများကတော့ ဆားနဲ့ စိမ်လို့ ရပေမယ့် အချဉ်စူးလွန်းတာကြောင့် ကင်းမွန် ငံပြာရည်နဲ့က ပိုစား ကောင်းပါတယ် ။
ငရုတျခဉျြ ၊ ကွကျသှနျခဉျြ ၊ ငရုတျ ကွကျသှနျခဉျြ ကမြအိမျမှာ အဆငျသငျ့ အမွဲလုပျထားတတျတဲ့ အိမျလုပျခဉျြ လေးတှကေို စားခငျြတဲ့ သူမြားအတှကျ တငျပေးလိုကျ တယျနျော ။
……… ပါဝငျ ပစ်စညျးမြား …….
၁ ။ ကွကျသှနျဖွူ ဥတဈလုံး ( အခှံနှာထားပါ ) ……. ၂ ။ ငရုတျတောငျ့ ရှညျ ( ခပျထူထူ လှီးထားပါ )…….. ၃ ။ ရှာလကာရညျ……၄ ။ ငံပွာရညျ………. ၅ ။ ဟငျးခပျမှုနျ့ ( မထညျ့လဲရ )
ပထမဆုံး ရှာလကာရညျ, ငံပွာရညျ, ဟငျးခပျမှုနျ့ တို့ကို ပနျးကနျလုံး တဈလုံးထဲ ထညျ့ပွီး မိမိစိတျကွိုကျ အရသာ အခြို, အငံစပျပါ ။ ဟငျးခပျမှုနျ့ ကတော့ မိမိအကွိုကျ အနညျး အမြား ထညျ့ပါ ။
မကွိုကျရငျ မထညျ့လဲ ရပါတယျ ။ အခဉျြဓါတျ ထိနျးဖို့ ကမြကတော့ ထညျ့ပါတယျ ။ ပီးတော့မှ ငရုတျ, ကွကျသှနျ ထညျ့ထားတဲ့ ပုလငျးထဲ ကနျတော့လေးနဲ့ လောငျးထညျ့လိုကျ ရုံပါပဲ ။
၎င်းငျးနောကျ ဖနျပုလငျးကို လလေုံအောငျ ပိတျထားပါ ။ ၃ ရကျဆို စ စားလို့ရပါပွီ ။ ခဉျြခဉျြလေး စားခငျြ ရငျတော့ တဈပတျထိ ထားပါ ။ မိမိစိတျကွိုကျ အခဉျြအရသာ ရပွီဆိုရငျတော့ ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့သိမျးထားပါ ။
ကွာလေ အခဉျြစူးလေ ဖွဈပွီး လုပျရတာလဲ လှယျကူတာမို့ ဖွဈနိုငျရငျ တော့ တဈခါလုပျ, တဈခါစားပဲ ကောငျးပါတယျ ။ ထမငျးပေါငျး,ထမငျးကွျော,ကွာဇံကွျော,ကွကျကငျ ဘာပဲ လုပျစားစား အိမျလုပျခဉျြ ရှိတော့ အဆငျသငျ့ စားရုံပါပဲ ။
Hot Pot နဲ့ စားရငျတော့ ခုစိမျထားတဲ့ အိမျလုပျခဉျြ ထဲကို သကွား ထပျထညျ့ပီး စားပါတယျ ။ အရောငျပါတဲ့ အခဉျြတှထေကျ အိမျလုပျခဉျြ ကို ပိုကွိုကျပါတယျ ။ ကျောဗူးက ကွာရငျ ကျောနံ့ ထှကျတတျတာမို့ ပုလငျးနဲ့ စိမျတာက ပိုကောငျး ပါတယျ ။ ခုလို စိမျထားတော့ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ငရုတျသီးစိမျးထဲကို အရသာ စိမျ့ဝငျနပေီး ပိုစားကောငျးပါတယျ ။
ကငျးမှနျ ငံပွာရညျ ထညျ့ထညျ့, ဗမာငံပွာရညျ ထညျ့ထညျ့ ရပါတယျ ။ ရမေရောရပါဘူး ။ သကျသကျလှတျ သမားမြားကတော့ ဆားနဲ့ စိမျလို့ ရပမေယျ့ အခဉျြစူးလှနျးတာကွောငျ့ ကငျးမှနျ ငံပွာရညျနဲ့က ပိုစား ကောငျးပါတယျ ။
လှတဲ့ မိနျးကလေးတှပေဲ ကွုံနရေတဲ့ နစေ့ဉျ အခကျအခဲလေးမြား
လှတဲ့ မိနျးကလေးတှပေဲ ကွုံနရေတဲ့ နစေ့ဉျ အခကျအခဲလေးမြား အလှအပကို လူတိုငျးက သဘောကြ တတျပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့ လှတာ ကောငျးတယျလို့ ယူဆနပေမေယျ့ တကယျတော့ လှတာက မကောငျးဘူးလို့ တှေးသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ အမြားအမွငျမှာ လှတယျလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့ မိနျးကလေးတှေ ကတော့ လှတာကွောငျ့ အခကျအခဲတှကေို နစေ့ဉျ ခံစားနရေပါတယျ။ သူတို့ ကွုံနရေတာတှေ ကတော့…. (၁) လူတှရေဲ့ အာရုံစိုကျခံရလှနျးတယျ လှတဲ့သူကို ကွညျ့တာ ဘာထူးဆနျးလဲလို့ ပွောကွလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လှတဲ့သူတှလေညျး လူပါပဲ။ အမွဲ ကိုယျဘာလုပျလုပျ လူတှကေ စိတျဝငျစားပွီး ပွောဆိုနရေတာ သူတို့အတှကျတော့ အမွဲ ကွုံနလေို့ …
အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများသာ ဖတ်ရန်…
အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများသာ ဖတ်ရန်… ညီ မ လေး ရေ …. လှ ပ တဲ့ မျက် နှာ တစ် ခု က တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွား လိမ့် မယ် … ။ စွဲ မက် စ ရာ ခ န္ဓာ ကိုယ် ကောက် ကြောင်း တွေ က လည်း တစ် ချိန် ကျ ရင် ပြောင်း လဲ …
ရေချိုးတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်ကိုတင်ပီး ဈေးဗန်းခင်းတဲ့ ရုပ်သံ လူကြည့်များနေ
ရေချိုးတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်ကိုတင်ပီး ဈေးဗန်းခင်းတဲ့ ရုပ်သံ လူကြည့်များနေ အွန်လိုင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြား ရေပန်းစားလာတာကတော့ ဈေးဗန်းခင်းတာပါ။ ဈေးဗန်းခင်းတိုင်းလည်း Rs ချိတ်ခွင့် ရတာမဟုတ်၊ အခင်းမတတ်ရင်လည်း သောက်ရှက် ကွဲတတ်ပါတယ်။ ပါးလေးဖောင်း လက်နှစ်ချောင်းထောင်တဲ့ ခေတ်ကလည်း ကုန်ခဲ့ပါပီ။ အခုက Tik Tok တော့မှာ ဖင်ကောက် ရင်ကော့ရာကတစ်ဆင့် ဖင်ဖော် ရင်ဖော်ပီး ခင်းနိုင်မှ တော်ကာကြတာကလား။ ခက်တာက မြန်မာဆန်ဆန် နန်းဆန်ဆန်လေး တင်လိုက်ပြန်တော့ Likeက ဆယ်ယောက်တောင် ပြည့်တာမဟုတ်။ တင်ရတာ ရှက်တောင် ရှက်စရာ။ ဟိုမှာ ရုပ်က သခေါ၊ ပြောင်းဖူးမွှေးရောင် အမွှေးနဲ့ ကမတွေများ ပေါင်တစ်ဝက်လောက်ဖော် လည်လေးဟိုက်ပီး က ပြလိုက်တာ …
This Year : 274611
Total Users : 569744
Total views : 2623456